Ny kilasy ambony amin'ny haino aman-jery sosialy dia tsy mahomby | Martech Zone
Ny kilasy ambony amin'ny haino aman-jery sosialy dia tsy mahomby
Zoma, Febroary 22, 2013 Zoma, Febroary 22, 2013 Douglas Karr
Tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa an'ny zanako vavy dia nanana faritra natokana ho an'ny zokiolona nantsoina hoe "rug senior" izy ireo. Ny "rug senior" dia faritra nahafinaritra natsangana tamina faritra iray tao amin'ny efitrano malalaky ny lisea azony izay afaka nihaona ny kilasy ambony. Tsy nisy mpianatra vaovao na kilasy zandriny niditra tao ambony lamba firakotra.
Midika izany fa tsy izany? Raha teôria dia manome ny zokiolona fahatsapana fahombiazana sy hambom-po. Ary angamba manome hafanam-po ireo mpianatra ambany mba hiakatra ka ho azy ireo indray andro any. Toy ny rehetra am-pianarana rafitra, na izany aza, ny loza dia ny fisarahana mitombo eo amin'ny kilasy ambony sy ny hafa.
Tany am-piandohan'ny media sosialy, tsy nisy rafitry ny kilasy. Rehefa nisy nanoratra lahatsoratra bilaogy tsara tao amin'ny tontolon'ny bilaogy, dia nankasitraka ny mpanoratra izahay rehetra ary nanandratra ny lahatsorany. Raha ny marina, nandritra ny fotoana ela aho dia tsy nanisy afa-tsy fampiroboroboana lahatsoratra bilaogy bilaogy vaovao hitako tao anatin'ny ezaka natao mba hamporisihana azy ireo sy hanomezana antoka fa azon'izy ireo tsara. Maro amin'ireo namako an-tserasera androany no olona nahita sy nizara ny bilaogiko na ny mifamadika amin'izany.
haino aman-jery sosialy manana niova. Rafitra kilasy iray no miorina tanteraka. Ary ny kilasy ambony dia mampisaraka an'izao tontolo izao amin'ny "kapany zokiny". Tsy ao amin'ny kilasy ambony aho, fa te hieritreritra hoe akaiky aho. Saingy indraindray tsy mahatsiaro izany. Manantona ny maro ao amin'ny kilasy ambony aho ary tsy mamaly izy ireo. Tsy mamaly amin'ny Twitter, Facebook, Google+ na mailaka mihitsy aza izy ireo.
Disclosure: Ity lahatsoratra ity dia mety mamaritra tsara ny fihetsiko koa. Tsy mitsikera ny hafa aho toy ny mahita fotsiny fiovana eo amin'ny tontolon'ny media sosialy.
Mahagaga. Raha manoratra boky momba ny herin'ny media sosialy ireto olona ireto ary milaza ny tantaran'ireo fotoana nomen'ny hafa azy ireo, dia manao tsinontsinona ny hanolo-tanana ny olona manaraka izy ireo. Namaky ny bilaoginy marobe aho ary nahita fanehoan-kevitra marobe avy amin'ny mpanaraka nanolo-tena izay mamerina mandefa hafatra, mizara ary miarahaba azy ireo amin'ny atiny lehibe… tsy misy valiny avy amin'ny pundit. Tsy misy. Tsy mitsikilo.
Miaraka amin'ny fitomboan'ity orinasa ity dia tsy milaza mihitsy aho hoe tsy maintsy valiana ny fangatahana rehetra - lehibe loatra ny isa. Izaho manokana dia nahita fa tsy afaka mamaly ny fangatahana rehetra. Fa Izaho do andramo. Raha misy resaka mandeha ao amin'ny tambazotran-tserasera misy ahy ary fantatro ny momba izany dia mahatsiaro tena ho voatery hanatevin-daharana ilay resaka aho. Io no kely indrindra azoko natao raha tsy manana fahefana ny tamba-jotra sosialy raha tsy ho an'ny mpamaky sy mpanaraka tsirairay.
Tsy hanome anarana anarana aho, ary tsy hiteny hoe ny rehetra aho. Betsaka ny maningana. Na izany aza, betsaka ihany koa ireo kintan'ny rock media sosialy izay tsy mihinana ny sakafon'ny alikany. Mivoaka izy ireo ary manoratra boky, miresaka ary mifampidinika amin'ireo orinasa lehibe - mibedy azy ireo rehefa tsy mangarahara na izy ireo mpifamofo. Ary avy eo niantso ny sakaizany ambony hafa izy ireo ary niresaka tamin'izy ireo noho ny tavoahangy divay tsara tao an-trano steak any an-toerana - tsy niraharaha ny tambajotran'izy ireo manokana.
Aza mino ireo olona mampihetsi-po. Raha manaraka ny iray amin'ireto matihanina ireto ianao dia mividy ny bokiny ary mijery azy ireo miteny… maka minitra vitsy handinihana ny zavatra nataon'izy ireo. Manaraka ny tari-dalany manokana ve izy ireo? Mamaly ny freshman sy ny junior ao amin'ny pejy Facebook-dry zareo ve izy ireo? Moa ve mamerina ny fanehoan-kevitra tsara avy amin'ireo mpanaraka izay tsy manaraka izy ireo? Manaraka ny resaka ao amin'ny bilaogin'izy ireo ve izy ireo?
Raha tsy izany dia mandehana mitady olona manao! Sintomy avy eo ambanin'izy ireo ny karipetra.
Tags: Mitabatabahaino aman-jery sosialympanoratra media sosialymanam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialympampianatra media sosialympandahateny amin'ny media sosialy
Quintly: Fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy sy ny benchmarking
Ahoana ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'i Pinterest
22 Mey 2013 tamin'ny 3:57 hariva
Manantena aho fa afaka milaza aho fa miombon-kevitra amin'ny lahatsoratrareo, ary azoko antoka fa marina amin'ny mpampiasa media sosialy sy bilaogera ny zavatra lazainao saingy mihevitra ny tenako ho zandriny amin'ny tontolon'ny fanaovana bilaogy aho ary tsy nanana na inona na inona afa-tsy traikefa tsara azoko tamin'izay ho an'ny sasany amin'ny antitra.
Nahazo valiny avy amin'ireo tovolahy lehibe toa an'i Chris Brogan, Jason Falls, Scott Stratten, Dave Kerpen sns aho ary efa nanoratra momba an'i Dave Kerpen sy ireo bokiny indroa koa aho ary nizara ny lahatsoratro tao amin'ny tambajotran-tseraserany izy.
Hatramin'ny zavatra niainako dia hitako fa maro amin'ireo lehilahy lehibe ao amin'ny media sosialy no mampihatra izay toriany, ka izany no mety hahombiazan'izy ireo.
22 Mey 2013 tamin'ny 4:09 hariva
Tsara re izany, @mattsouthern: disqus! Mety ho olona adaladala fotsiny aho. 🙂
22 Mey 2013 tamin'ny 4:10 hariva
Mamaly ny hevitry ny bilaoginao ianao amin'izay dia tsy ho adala toy izany! 🙂
22 Mey 2013 tamin'ny 4:49 hariva
Douglas, Yikes! Manantena aho fa tsy ao amin'ny sokajy “zoky ratsy”. Tiako ny mieritreritra fa manatratra tanana, mamaly ary mandray anjara. Misy olona mety ho nokasihiko teny an-dalana ve? Mazava ho azy. Indraindray aho tsy (na tsy afaka) manao raharaha. Tamin'ny herinandro lasa, ohatra, tany amin'ny toerana lavitra any Peroa sy Bolivia aho ary voafetra ny fahafahako miditra amin'ny Internet (adiny iray isan'andro fotsiny). Omaly aho dia nandeha fiaramanidina nandritra ny 10 ora. Indraindray aorian'ny lahateny iray dia hahazo bitsika 200 na 300 sy fangatahana namana 50 amin'ny Facebook aho. Tsy manao fialantsiny aho fa milaza ny zava-misy fotsiny. Na izany aza, matetika aho dia manandrana mora hatonina.
22 Mey 2013 tamin'ny 5:02 hariva
@douglaskarr: disqus @ google-4e3cce4e05af3f9a841d921fe02f1ea7: disqus @mattsouthern: disqus Fanamarihana tsara. Tena hitako ny sasany amin'ireo zokiolona mamorona "klioba manokana" izay manatona ilay zazavavin-tena miaraka amin'ny antony tsy tena fifandraisana, fa kosa manantena ny hamatotra azy ireo amin'ny webinar "maimaim-poana" izay lasa lasa varotra. Ny zavatra dia, sahala amin'ireo eo amin'ny karipetra zokiny indrindra, dia tsy ho ela izy ireo dia mila miroso sy mivoatra, na izy ireo ihany no ho lasa resy mamikitra hatrany amin'ny kilasy faha-12.
23 Feb 2013 tamin'ny 8:52 maraina
Tiavo ny hevitra momba ny "miverina kilasy faha-12"! Misy ihany koa ny fampitahana an'ireo olona avy amin'ny lisea izay mbola mipetraka ao an-trano, mantsaka lasantsy, ary misaintsaina ny androny tamin'ny naha kintana baolina kitra azy ho tsara indrindra ho azy ireo.
22 Mey 2013 tamin'ny 5:11 hariva
Mahagaga ve izany. Ny consultancies fitantanana dia nitory ny herin'ny fanovana, saingy izy ireo no mahatohitra indrindra ny fanovana. Zava-misy: mbola mampihatra ny SAP tamin'ny fomba 20 taona lasa izy ireo. Ka ireo "guru media sosialy" dia consultant fotsiny. Ary tadidio fa ny consultant dia bandy mahalala fomba 1,000 hanaovana fitiavana, nefa tsy manana sipa. (famoahana: mpiara-miasa amin'ny iray amin'ireo Big4)
23 Feb 2013 tamin'ny 8:47 maraina
Raha ny amiko, farafaharatsiny, tsy consultant aho. Manoratra boky, manao kabary, mihazakazaka masterclass, manao coaching ary mipetraka eo amin'ny tabilaon'ny mpanolo-tsaina. Na izany aza, 6 taona lasa izay dia mbola tsy nanao consulting akory aho.
22 Mey 2013 tamin'ny 6:45 hariva
Nanana eritreritra toy izany koa aho, nanoratra azy teo aloha .. mbola toe-javatra 'mileage may vary'. Tahaka an'i Matt hitako sy niainako ny 'sangany' nandeha tamin'ny resak'izy ireo ary toy ny ahitanao azy ireo .. tsy dia be loatra. Nahita vitsivitsy niditra an-tsehatra tamin'ny laharany aho mba hiresaka, nefa mahita ny hafa ankilabao. Rehefa mieritreritra ireo izay mitohy mandeha .. dia ho hitantsika raha tsy mampihatra izay toriny ireo mpanolotsaina antsika, raha mividy boky isika, manatrika ireo lahateny, mandoa ny saram-pitsaboana mavesatra, manindry ny bokotra sy ny badge ary milalao hatrany an'io lalao io . Ka tsy azoko antoka raha tsy maharesy antsika izy ireo .. mitandrema ny mpividy marina?
Amin'izao fotoana izao dia izaho no ifantohako. Miezaka ny tsy hanahy be loatra amin'ny hafa aho, zavatra tsy voafehiko. Hanohy ny zavatra ataoko aho, hiasa mafy amin'ny fanaovana bebe kokoa, hanao tsara kokoa ho ahy, ny mpanjifako, ny bizako. FWIW.
23 Feb 2013 tamin'ny 4:26 maraina
@douglas, mety marina ny zavatra lazainao, mety nitranga izany taminao, angamba “zokiolona” no tonga amin'ny sehatra iray hamaly ny resaka natao fotsiny izay ataon'ireo zazalahy lehibe rehefa manome lanja izy ireo… fa ny fototry ny ambaran'i yoy toa diso kely. Ny fanatrarana ny avo indrindra amin'ny haino aman-jery sosialy dia TSY manery anao hamaly isaky ny lahatsoratra na hevitra, na amin'ireo lahatsoratra izay mety tsy manampy sanda. Amin'ny farany, izany no mahatonga azy ireo eto (manampy zava-manitra amin'ny resaka). Ary ho an'ny sasany toa an'i @David Meerman, tsy afaka manao izany isika (raha tsy mpanampy mpanampy izy).
23 Feb 2013 tamin'ny 8:50 maraina
Nandinika ny hevitra hoe manana mpanampy aho. Saingy nanatsoaka hevitra aho fa tsy misy fomba mety ahafahako mandray anjara amin'ny sosialy amin'ny anarako. Tsisy fika. Raha manana ny anarako io dia nosoratako izy. Nolazaiko tamin'ny olona toa an'i Guy Kawasaki fa tiako ny zavatra ataony nefa tsy miombon-kevitra amin'ny famoahana sy fandefasana mandeha ho azy ataon'ny mpanampy.
24 Mey 2013 tamin'ny 2:39 hariva
Voalohany, ekeko sy hamafisiko ny firoboroboan'ny media sosialy sy ny mpanaraka azy "ship-Follower". Faharoa, nisy ny olona nisafidy ny tsy hanentsina ny fantsom-pifandraisana, lahatsoratra ary boaty anaty boaty amin'ny fanekena tsy misy antony ireo fanehoan-kevitra sy “Retweet”. Ary farany, ity no fiainana. TSY mahazo medaly fotsiny ianao amin'ny fisehoana. Ny tena fifamofoana dia mangataka valiny; "Ditto-loha" aza.
28 Feb 2013 tamin'ny 12:27 maraina
Douglas Marjorie Clayman dia nanoratra momba izany tamin'ny fomba hafa- ary koa io fomba io. Nahazo ny famaranana an'ity efa-taona lasa ity aho ary dia taitra tahaka izany taloha sy ankehitriny. Ny fihetsik'izy ireo dia tsy nifanaraka tamin'ny zavatra nolazain'izy ireo, fantatro vetivety hoe iza no feno ^ * (.
Mahasosotra anao ny mahita izany fihetsika izany ary avy eo dia hoy aho hoe whateva, nifantoka tamin'izay nitomboako ho an'ny orinasako. Amin'ny lafiny iray hafa amin'ity korontana ity, fantatro ny dingana tsirairay, amin'ny alàlan'ny fanomezana lanja ireo mpihaino isan-kerinandro - ny mpihaino rehetra momba ny #BBSradio dia avy amin'ny fandehanana ny lahateniko fa tsy hoe satria nisy mpihaino A namoaka ahy ho any amin'ny “mpihaino. "
Afaka nihazakazaka vitsivitsy aho tamin'ny fizarana ny fomba firesahan'izy ireo tamiko tao ambadiky ny seho. Nianatra haingana aho, manahy ny amin'ny satany izy ireo rehefa misy olona tonga hendry toa azy ary mahamenatra izany. Aleoko mampiroborobo ireo manodidina ahy ary fantatro fa afaka mivoatra daholo isika. Tsy tokony hifaneraserana izany raha misy fahombiazana ny iray amintsika, fa kosa manatsara ny fahombiazana ho antsika rehetra.